ရုပ်ရှင်ထဲကသင်ခန်းစာများ – ၇ – Live the Dream
ရုပ်ရှင်ထဲကသင်ခန်းစာများ – ၇
ရုပ်ရှင် TV နှင့် ပြဇာတ် ,ရုပ်ရှင်ထဲက သင်ခန်းစာများ
Movie Review အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ကြပြီလား…အရင်အပတ်တွေက Movie Review အတွက် မေးခွန်းမေးခဲ့တာကို မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းအတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Live The Dream Media ကို အားပေးနေတဲ့သူများက Comment တွေအများအပြားပေးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီ comment တွေထဲကမှ Movie Review လုပ်ဖို့ Biography, True Story နဲ့ Business movie တွေကို Review လုပ်ပေးဖို့ အများအပြားတောင်းဆိုတာကို တွေ့ရတဲ့အတွက် ဒီအပတ်ရဲ့ Movie Review ကဏ္ဍမှာ တောင်းဆိုထားတဲ့ ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားနဲ့ဆိုင်တဲ့ ရုပ်ရှင်(၃)ကားကို Review လုပ်ပေးပါရစေခင်ဗျ။
ရုပ်ရှင်ဆိုတာက ကြည့်တတ်ရင် အပန်းဖြေစရာတစ်ခုသာမက သင်ခန်းစာရစရာတွေအပြင် တစ်ခါတစ်ရံအတွေးသစ်အမြင်သစ်တွေကို ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်တဲ့အထိ အကျိုးရှိစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အားလုံးလက်ခံကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကဲ ဒီအပတ်ရဲ့ Movie Review ကဏ္ဍလေးမှာရော ဘာတွေများရရှိမလဲကြည့်ရအောင်ဗျာ…
၁။ Steve Jobs: The Man in the Machine (2015)
“ Steve ဆုံးသွားတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း တုန်လှုပ်သွားခဲ့တယ်။ သူ့မှာသာမာန်လူထက်ခွဲထွက်နိုင်တဲ့ ထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေအများကြီးရှိတယ်။ သူလုပ်ချင်တာလုပ်ခဲ့တယ်၊ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဟုတ်ပါတယ် သူက ကျွန်တော်တို့ကို ပြောင်းလဲပေးခဲ့တာ” တစ်လှိမ့်ခြင်း စီးနေတဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့ Steve Jobs အကြောင်းကို ပြောပြနေတဲ့ Steve ရဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်။ တစ်ဆက်ထဲမှာပဲ Steve Jobs ဆုံးသွားတော့ သတိရအောက်မေ့ဖွယ်ပန်းစည်း လေးတွေကို ချရင်း မျက်ရည်ကျရင်းနဲ့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က လူတွေကလည်း ကြေကွဲနေရတယ်။ လူတွေက ဘာလို့ Steve ကို ချစ်ရတာလဲ?
၁၉ရာစုနှောင်းပိုင်းက ကွန်ပြူတာဆို တာ ထုထည်ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီး လူတိုင်းသုံးခွင့်မရှိတဲ့ ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုခေတ်ရဲ့ နည်းပညာလောကအတွက် အပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားလုပ်ချင်တဲ့ Steve Job ရဲ့မီးလိုတောက်လောင်နေတဲ့ စိတ်စေတနာတစ်ခုက အရမ်းထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခု၊ သမိုင်းတွင်လောက်တဲ့ဆန်းသစ်တဲ့အရာတစ်ခု။ အဲ့ဒီအရာက လူတိုင်းအတွက် တစ်ကိုယ်ရည်သုံးကွန်ပြူတာ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့။ ဒီတော့ သူ့အိမ်မက်က သေးသေးမွှားမွှားတော့မဟုတ်။ Apple ကုမ္ပဏီရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Think Different ဆိုတဲ့အတိုင်း သူ့ရဲ့ အတွေးတွေက အများနဲ့မတူ သလို သူရည်မှန်းထားတဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သုံးကွန်ပြူတာထုတ်လုပ်အိမ်မက်တွေက မကြာခဏဖျက်ဆီးခံရပေမဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိသွားခဲ့တာကိုကြည့်ရင် ဘဝတွေ ခါးသီးခဲ့တာတော့အမှန်ပါပဲ။ အဲ့ဒီခေတ်က လူတွေကတော့ သူ့ကိုမှတ်ချက်ပေးကြတယ် “ ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာတစ်ခုကို ရှာဖွေတာဟာသူ့အတွက် ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းမှုရမှာမဟုတ်သလို ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့လည်း ဘယ်တော့မှ သဟဇာတမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့” ။ ဒါတွေကို သူဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ရလဲဆိုတာ Steve Jobs ရဲ့ Life Story Documentry Movie ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ သူရဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ကြက်သီးထမိပါတယ်။ Apple ကထုတ်တဲ့ Iphone မော်ဒယ်အဟောင်းလေးဖြစ်ဖြစ်ကိုင်ပြီး Steve ရဲ့စေတနာတွေကို တစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ် ခံစားကြည့်ချင်မိပါတယ်။
ဒီလို Apple ကထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို အများကချစ်နိုင်ဖို့အတွက် Apple ရဲ့ CEO ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Steve Job ရဲ့ ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ ခံယူချက်တွေ၊ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့မှုတွေ က လူငယ်တွေအတွက် အတုစရာ၊ အားကျလေးစားစရာဖြစ်စေပါတယ်။ သူတွေ့ကြုံရတဲ့ပြဿနာဒုက္ခတွေ ခါးစည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်တဲ့လမ်းဆီ မရောက်ရောက်အောင်လျှောက်လှမ်းခဲ့တာကလည်း တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကို ရှာဖွေလျှောက်လှမ်းနေဆဲ လူငယ်တွေအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေမှာတော့ အသေအချာပါပဲ။ ကဲ ဒီတော့ကာ Steve Jobs: The Man in the Machine ဆိုတဲ့ Documentary Movie လေးကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရင်းနဲ့ သင်ခန်းစာယူလိုက်ပါနော်..
၂။ Lion (2016)
အသက် ၅နှစ်အရွယ်ကတည်းက မိသားစုနဲ့ ဝေးကွာသွားခဲ့ရတဲ့ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား Saroo လေးဟာ ကံကြမ္မာအပြောင်းအလဲကြောင့် သြစတေးလျနိုင်ငံသား မိဘနှစ်ပါးမှ ခေါ်ယူမွေးစားခံခဲ့ ရပါတယ်။ တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် အသက်တွေ ကြီးပြင်းလာရင်း သူ့မှတ်ဉာဏ်မှာ အမြဲမြင်ယောင်နေတဲ့ ငယ်ဘဝဟာ သူရဲ့ မိသားစုကို သွားရောက်ရှာဖွေဖို့ တွန်းအားတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ငယ်စဉ်က အစ်ကို ဖြစ်သူနဲ့ သွားလာခဲ့ဖူးတဲ့ ရထားလမ်းမ တွေအပြင် တစ်ခြား ဘာကိုမှ မမှတ်မိတော့တဲ့ Saroo အတွက် Google Earth တစ်ခုကသာ သူ့ရဲ့ မိသားစု ရှာဖွေရေး မှာ အားကိုးဖွယ်ရာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အခက်အခဲတွေ အတားအဆီးတွေ အထပ်ထပ်ရှိခဲ့တဲ့ ကြားထဲက အဆုံးမှာ သူ့ရဲ့ မွေးမိခင်နဲ့ တွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့ ရဲ့လား……
လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လိုသာလွန် ကောင်းမွန်တဲ့ အခြေအနေ မှာပဲရှိနေပါစေ မိမိရဲ့ မူလဖြစ်တည်မှု ဇစ်မြစ် ဆိုတာ ဖျောက်ဖျက် ထားလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဘဝမှာ အဆင်ပြေကောင်းမွန်နေတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်ရှိလာတဲ့အခါ လူသားပီပီ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝအစ မိမိဘ၀ စတင် အခြေတည်ရာ ကို မမေ့လျော့ဘဲ အောက်ခြေလွတ်သွားတဲ့သူ မျိုး မဖြစ်မိစေဖို့က အရေးကြီးလှပါတယ်။ ငယ်စဉ်က အစ်ကို ဖြစ်သူနဲ့ အမြဲတပူးပူး တွေ့ရတတ်ပြီး ၂၅ နှစ်ကျော်ကြာ ဝေးကွာခဲ့တဲ့ မိသားစုကို ရရာနည်းလမ်း နဲ့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရှာဖွေခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကောင် Saroo ရဲ့ မိသားစုအပေါ် ချစ်မေတ္တာတွေ သံယောဇဉ်တွေက တော့ ကြည်နူးစရာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရော ကိုယ့်နောက်မှာ အမြဲ မားမားမတ်မတ် ရှိနေပေးတဲ့ မိသားစုအပေါ် မေတ္တာတွေ ဘယ်လောက်ပြနိုင်ခဲ့လဲ? သူ့ရဲ့ မွေးစားမိခင်ဟာလည်း ကျန်းကျန်းမာမာ ကလေးမွေးဖွားနိုင်ပေမဲ့ “လောကမှာ လုံလောက်တဲ့ လူသားဦးရေ ရှိနေပြီးသားလို့ ငါတို့ခံစားမိတယ်။ ကလေးတစ်ယောက် မွေးဖွားလိုက်ခြင်းဟာ ပိုပြီးကောင်းမွန်လာမယ်ဆိုတာ အာမ မခံနိုင်ပေမဲ့ မင်းတို့လို မေတ္တာငတ်နေတဲကလေးတွေကို ခေါ်ယူစောင့်ရှောက် လိုက်တာဟာ အဓိပ္ပာယ် ပြည့်စုံတယ်လို့ ခံယူထားတယ်” ဆိုပြီး အင်မတန် မှ ရှားပါးတဲ့ ခံယူချက် တစ်ခုကို ဖွင့်ဟလာခဲ့တာ လေးစားစရာပါ။ Lion ဇာတ်ကားကတော့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံဖွား Saroo Brierly ကိုယ်တိုင် အမှန်တကယ် သူ့ရဲ့ မိခင်ကို ရှာဖွေခဲ့ပုံ ဇာတ်ကြောင်းကို ရေးသားထားတဲ့ A Long Way Home ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို အခြေခံ ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှုသူတိုင်းကို ရသစုံလင်စွာ ပေးစွမ်းနိုင်မှာ အမှန်ပါပဲ။
၃။ The Devil Wears Prada (2006)
အပြင်းစား Drama တွေ ငိုရတဲ့ ရုပ်ရှင် တွေညွှန်းအပြီးမှာ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ကြည့်လို့ ကောင်းတဲ့ The Devil Wears Prada ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ ထပ်ပြီး မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ..
Journalist ဖြစ်ချင်တဲ့ Andy ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ဟာ နာမည်ရ ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်း တစ်ခုမှာ အယ်ဒီတာချုပ်ရဲ့ လက်ထောက် အနေနဲ့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အကြိုက် သူ့ရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်နဲ့ မတူ ဘဲ ကွဲပြားနေတဲ့ နေရာသစ် ကို ရောက်သွားတဲ့ အခါ လိုက်လျောညီထွေ နေထိုင်ရင်း အဆင်မပြေမှုတွေကြားထဲက သူ့ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ဆီ ဘယ်လို လျှောက်လှမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရမှ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းရဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် မိန်းခလေးတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို အပြည့်အဝဖမ်းစားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီကားထဲမှာတော့ လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ တွေ့ရတဲ့ လူတွေရဲ့အပြုအမူတွေ၊ စီးပွားရေး လောကမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ လှည့်ကွက်တွေကို မြင်တွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်ကောင်စရိုက် အသီးသီးဟာ ကျွန်တော်တို့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းခွင်မှာ တွေ့နေရတဲ့ လူတွေနဲ့ ထပ်တူကျနေပါတယ်။
အချိန်ရှိသမျှ အလုပ်နဲ့ လက်နဲ့ မပြတ် သလို ဇီဇာကြောင် လွန်းတဲ့ အလုပ်ရှင် ရဲ့ ဖိအားတွေအောက်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ အလုပ်ဝင်ခါစ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ကမောက်ကမ ဖြစ်ရပ်တွေ၊ အလုပ်ချိန်ကျော်လွန် သွားချိန်မှာတောင် မိမိကို ပေးအပ်လာတဲ့ တာဝန်တွေကို ဆင်ခြေ တွေ ပေးမနေဘဲ တတ်စွမ်းသလောက် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ Andy ရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကတော့ လေးစားစရာပါပဲ။ သို့ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ကြိုးစားမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုမခံရတဲ့အခါမှာ လူသားတစ်ယောက် လူငယ်တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အလျောက် Andy ဟာလည်း စိတ်ဓာတ် ကျရတဲ့အကြိမ်တွေ ဒေါသထွက်ရတဲ့ အချိန်တွေ မနည်းပါဘူး။ အဲဒီအချိန်တွေမှာ ထိုင်ပြီးညည်းညူနေမဲ့အစား အဖြေကိုသာ ရှာဖွေပြီး ဖြေရှင်းတတ်သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခုခုမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့ အခါမှာ အခက်အခဲတွေ ဖိအားတွေနဲ့ ကြုံတွေ့လာရမှာ ပြေးမလွတ် ပါဘူး။ ဒီလို ကြုံလာရတိုင်း ပင်ပန်းတယ် ဆိုပြီး လက်မလျှော့သွားဖို့ ကျွန်တော်တို့ကို Andy ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက သတိပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စိတ်တွေမွန်းကြပ်လာတဲ့ အခါ ထွက်ပေါက်အမျိုးမျိုး ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ကိုယ်ရည်မှန်းတဲ့ ပန်းတိုင်ကို ပြန်လည်ဦးတည်ပြီး သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ပြန်လည် ဆက်လျှောက်သွားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပင်ပန်းရင်နားပါ။ နားပြီးရင် ပြန်လျှောက်ပါ။ ဘယ်တော့မှ မရပ်တံ့လိုက်ဖို့ ကိုယ့်ကို တိုက်တွန်းခွန်အားပေးနေတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ မလွှတ်တမ်းရှာဖွေ ကြည့်ရှုဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ…။